NOUVELLE EVANGELISATION et ANNEE SAINTE DE LA MI
« Affrontons la nouvelle évangélisation avec enthousiasme »
Recueillis par JRR il y a 5 années
A l’occasion du Synode sur la nouvelle évangélisation le Pape Emérite Benoit XVI, a promulgué pour l’Année de la Foi (11 octobre 2012) la lettre Apostolique PORTA FIDEI, et a créé en même temps un Conseil Pontifical pour la promotion de la Nouvelle Evangélisation.
Andron’ny marary 2016
127 isa ireo marary nangataka fivavahana manokana tao Moramanga
admin il y a 6 années
Ny taona 1992 ny Papa Joany Paoly faha2 no nanomboka nametraka ny 11 fevrie ho andro hivavahana manokana ho an'ireo marary rehetra. Fetin'ny "Notre Dame de Lourdes" io 11 fevrie io. Nanomboka teo dia nomarihana maneran-tany isan-taona io andro io. Ny fotoam-bavaka tao Moramanga no taterina etoana.
Mgr Hafner Alwin
Lasa ny Raiamandreniben’ny diosezin’i Morombe
Nanangona RRJ il y a 6 années
Nodimandry tamin’ny 7 Janoary lasa teo i Mgr Hafner Alwin Albert MSF rahefa nivahiny 86 taona teto an-tany, izay evekan’ny Diosezin’i Morombe taloha.
FIVONDRONAMBEN’NY EVEKA ETO MADAGASIKARA
« Sambatra ny mamindra fo, fa hamindrana fo izy » (Mt 5, 7)
« Sambatra ny mamindra fo, fa hamindrana fo izy » (Mt 5, 7) HAFATRA HO AN’NY KRISTIANINA SY IREO TSARA SITRAPO REHETRA Homba antsika mianakavy anie ny Fiadanana.
Diosezy folo mankalaza taon-jobily faha 60
Efa nivoaka io alakamisy 6 aogositra maraina io ny gazety Lakroan'i Madagasikara lahrana 3932, daty 9 aogositra 2015). Misy fanadiahadiana manokana mikasika ny faha-60 taonan'ny diosezy folo ao azo vakiana ao amin'ny pejy faha7 hatramin'ny faha10.
Fanamasinana pretra sy diakra fikambanana Karma
Rojo Randrianarimalala il y a 6 années
Ao anatin’ny diabe am-bavaka fahasivy ny fikambanan’ny Karma amin’izao. Toy ny fanaon’izy ireo dia faranana amin’ny fanamasinana pretra hatrany izany.